बाम गठबन्धनबारे भारतीय प्रोफेसर एसडी मुनीले दिए यस्तो खतरनाक चेतावनी, अब के छ भारतको प्लान ? — Imandarmedia.com
बाम गठबन्धनबारे भारतीय प्रोफेसर एसडी मुनीले दिए यस्तो खतरनाक चेतावनी, अब के छ भारतको प्लान ?
नेपालमा आम निर्वाचन सकिएसँगै भारतीय मिडियामा नेपालसम्बन्धी समाचार र विचारहरु दिनहुँजसो छाउन थालेका छन् । नेपालमा वामपन्थीहरुको बहुमत आएसँगै भारतीय मिडियाले आत्तिँदै चिनियाँ प्रभाव बढेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
भारतले भुटानसँग जस्तो गरेको छ, नेपालमा पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ । आफ्नो तत्कालको छिमेकमा चिनियाँ चुनौति गम्भीर बनिरहेता पनि भारतीय नीति निर्माताहरुले स्वीकार गर्नैपर्छ कि छिमेकी देशहरुको भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेपछि चीनप्रति प्रेम बस्न थाल्छ । छिमेकमा चीनको चुनौतिको अंश साना छिमेकीहरुप्रति आफ्नो महत्पूर्ण नीतिगत विकल्पहरुको संशोधनबाट सामना गर्न सकिन्छ ।
२०७४ पुष २ गते प्रकाशित